Bayisibonelo kwabanye abafundi | News24
Bayisibonelo kwabanye abafundi
ISITHOMBE: SithunyelweAbafundi baseDlukulwane abangamalungu e-Youth Citizens Action Programme esikoleni sabo.
ABAFUNDI baseDlukulwane Primary School eGcilima beqembu le-Youth Citizens Action Programme (YCAP) abasesithombeni, banohlelo esikoleni lokuqwashisa abanye abafundi ngokuba nempilo enhle. Babatshela ngezindlela ezahlukene zokuzigcina unempilo njengokudla ukudla okunomsoco, ukuzilolonga imizimba ngokuthi badlale, ukugeza izandla njalo, nokungalahli ukudla okusele ngemuva kwamagumbi okufundela. Sebenze nezinto zokugeza izandla eduze kwezindlu zangasese.
Laba bafundi bakhuthaza nabazali ukuthi babalekelele ngokufakela abantwana babo ukudla okunomsoco ezitsheni zomphako abaziphatha esikoleni. Bathi loluhlelo bazoluqhuba bacele nabantu abahlukene njengabasemtholampilo oseduzane ukuthi beze bazokhuluma nabafundi ngokuba nempilo enhle.